Programs कार्यक्रम घर योजनाहरू बनाउने (मोबाइल अनुप्रयोगहरू) | सजाउनुहोस्
Programs कार्यक्रम घर योजनाहरू बनाउने (मोबाइल अनुप्रयोगहरू)
मारिया vazquez | | डिजाइन
के तपाईं आफ्नो भविष्यको घर डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँ हालको पुन: कन्फिगर गर्न चाहानुहुन्छ र सबै विकल्पहरू हेर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ? तपाईं चाहनुहुन्छ योजनाहरू कोर्नुहोस् तपाईंको घरको सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर वितरण छनौट गर्नका लागि? घरको लागि योजना बनाउन र डिजाइन गर्न चाहनुको थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। र यो गर्न पनि धेरै तरिकाहरू।
कार्यक्रमहरु ल्यापटप वा मोबाइलको प्रयोग गरेर घर योजनाहरू बनाउनको लागि अनुमति दिनुहोस् यसले उनीहरूको पारम्परिक तरिकालाई अब सम्म ठूलो रूपमा बदलिएको छ। उनीहरूले पनि योजनाको साथ काम नगरे पनि यी अनुप्रयोगहरूको सहज ज्ञानका लागि धन्यवाद दिन सक्छन्। के तपाई प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ?
केही हप्ता पहिले हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरे जुन तपाईंलाई फर्निचर र सामग्री वितरणमा मद्दत गर्दछ तपाईको घरको सजावट। आज हामीले घर योजनाहरू बनाउनको लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रमहरू यति फरक छैन। उनीहरु सहज र पहुँचयोग्य प्रोग्रामहरू सबैको लागि
सबै कार्यक्रम र मोबाइल अनुप्रयोगहरू घर योजना बनाउन सित्तैमा छैन। उनीहरूले प्रदान गर्ने बढी सम्भावनाहरू वा अर्को शब्दहरूमा तिनीहरू व्यावसायिक कार्यक्रमको नजीक छन्, तिनीहरूको लागत उच्च छ। तपाईको हातमा एउटा छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईको व्यावहारिक, प्राविधिक र आर्थिक आवश्यकतालाई उत्तम सूट गर्दछ।
1 फ्लोर प्लानर
2 योजनाकार 5D
4 म द्वारा घर
फ्लोर योजनाकारको साथ तपाईं सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ 2D र3डी योजनाहरू सजिलोसँग र परिणामहरू एक आकर्षक तरिकामा कल्पना गर्नुहोस्। योसँग एक सहज सम्पादक छ, जसले तपाईंलाई मिनेटमा पहिलो फर्श योजना तयार गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईं आफूले चाहे जति धेरै परियोजनाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र २ डी र थ्रीडी फ्लोर प्लान छविहरू नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्। जहाँसम्म, तपाईले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ यदि तपाईं अधिक सुविधाहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ: बहु तला र उच्च गुणहरूको छवि।
एक पटक योजना को रूप को लागी, तपाईं यसको स्वचालित सजावट समारोह को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई केही क्लिकले प्रस्तुत गर्न वा फर्नीचर लाइभरी एक एक गरी तपाईंको लाइब्रेरीबाट छनौट गर्नुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि यसको सबै उपकरणहरू स्मार्टफोनमा देख्न सकिदैन, त्यसैले विचार हुनेछ मोबाइल अनुप्रयोगको पूरक पीसी को लागी आवेदन सहित।
योजनाकार 5D घर डिजाइन उपकरण हो उन्नत र प्रयोग गर्न सजिलो। यसको 38793357,,23h, XNUMX .XNUMX को शौक डिजाइनरहरूको समुदाय यसलाई बाहिर लिन्छ। फ्लोर योजनाहरू र डिजाईन फर्नीचर सिर्जना गर्न २D मोड प्रयोग गर्नुहोस्, र कुनै कोणबाट तपाईंको डिजाईन अन्वेषण गर्न र सम्पादन गर्न थ्रीडीमा स्विच गर्नुहोस्।
तपाईं स्क्र्याचबाट तपाईंको योजनाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, कोठाको आकार छनौट गरेर यसलाई पुनःआकार दिन, वा ग्यालरीमा अवस्थित परियोजनामा ​​निर्माण गर्न। समाप्त भएपछि, तपाईं आफ्नो डिजाइनहरूको स्क्रीनशट लिन सक्नुहुनेछ र सामाजिक साथीहरूमा तपाईंको साथीहरूसँग साझा गर्न सक्नुहुनेछ। यो availabe छ? सबै प्लेटफर्महरूको लागि तिनीहरू बीच पूर्ण अनुकूलता संग।
स्केचअप एक हो मनपर्ने थ्रीडी सफ्टवेयर। यसले तपाईंलाई धेरै चाँडो र सहजै मोडेल गर्न र रोचक स्केचहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। कार्यक्रम यसको संसाधनहरू बीच एक भिडियो ट्यूटोरियल पर्यावरण कसरी डिजाईन र मोडेल गर्न सकिन्छ भन्ने चरण-चरण जान्नको लागि समावेश गर्दछ।
स्केचअपको अर्को सामर्थ्य यो हो कि तपाईंले स्क्र्याचबाट सबै चीज निर्माण गर्नु हुँदैन। इन्टरनेट मा सयौं हजारौं वस्तुहरु को लागी सबै प्रकारको को लागी तयार गरीएको छ तपाइँको मोडेलमा सिधा घुसाउनुहोस्। तपाईं यसलाई अनलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा यसको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, बिभिन्न दरहरू उपलब्ध छन्।
तपाईं आफ्नो परियोजनाहरू आरामदायक तरिकामा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको कुनै पनि छविहरू निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ। एक पटक जेनेरिक ढाँचामा बचत भएपछि, तपाईले आफ्नो कामको प्रतिलिपि गर्न, पठाउन र साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ जो तपाईले चाहानुहुन्छ। यसलाई पनि खोल्नुहोस् र तपाईको अनुप्रयोगमा हेर्नुहोस् मोबाइल
म द्वारा घर
डिजाइन, सुसज्जित र सजावट। मद्वारा घरले तपाईंलाई २ डीमा तपाईंको योजनाहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंको घर थ्रीडीमा सजाउनुहोस् र तपाईंको शैली एकदम सरल र सहज उपकरणको साथ व्यक्त गर्नुहोस्। यो घर निर्माण उपकरण प्रयोग गरेर र तपाईं आफ्नो प्रोजेक्टको लेआउटको पहिलो प्रभाव फर्नीचर, बत्ती, रबहरूको विस्तृत सूचीका लागि धन्यवाद गर्न सक्नुहुन्छ ...
रेजिष्ट्रेसनको क्षणदेखि तपाईसँग real यथार्थवादी छविहरू र free नि: शुल्क परियोजनाहरू छन्। तिमी सक्छौ तपाईंको योजनाहरू आयात गर्नुहोस्, कोठाहरू सिर्जना गर्नुहोस् र ढोका र विन्डोजहरू थप गर्नुहोस्। तपाइँको योजनालाई परियोजनामा ​​परिवर्तन गर्न समय छैन? त्यसो भए HomeByMe ले तपाईंको लागि € 14,99 बाट गर्न सक्दछ।
रूमस्केचरले तपाईंलाई तपाईंको कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा मोबाइलमा फ्लोर योजनाहरू र घर डिजाइनहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं अवस्थित स्केच वा भुइँ योजना अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको चित्रकारहरूले तपाईंको लागि फ्लोर योजनाहरू सिर्जना गर्न दिनुहोस्। तपाईका परियोजनाहरू क्लाउडमा भण्डार गरिएको छ र उपकरणहरू बीच सिnc्क गर्नुहोस् ताकि तपाईं कुनै पनि समय, कहीं पनि पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ व्यावसायिक 2D फ्लोर योजनाहरु जसले मापन र कुल क्षेत्र सामेल गर्दछ र तिनीहरूलाई प्रिन्ट र वेब को लागी बहु स्वरूपहरूमा मापन गर्न डाउनलोड गर्नुहोस्। यीबाट तपाईं थ्रीडी छविहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ कसरी नयाँ रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट वा कोठा एउटा रिमोडलमा देखा पर्नेछ। कार्यहरू र सम्भावनाहरूको संख्या तपाईंले छनौट गर्नुभएको योजनामा ​​निर्भर गर्दछ: नि: शुल्क, वीआईपी ($ / / वर्ष) वा प्रो।
के तपाईंलाई यी कुनै प्रोग्रामहरू थाहा छ? के तपाईं ती मध्ये कुनै प्रयास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » डिजाइन » Programs कार्यक्रम घर योजनाहरू बनाउने (मोबाइल अनुप्रयोगहरू)
तपाईंको छुट्टीको घर सजाउने विचारहरू
कसरी तपाईंको घरबाट एस्बेस्टोस हटाउने